Champions League:Falaqayenta kulanka culus ee caawa dhexmaraya Chelsea & Barca – SBC
Champions League:Falaqayenta kulanka culus ee caawa dhexmaraya Chelsea & Barca
Posted by editor on Apriil 18, 2012 Comments
Kulan adag oo ah lugtii koowaad ee wareega Semi-final-ka ayaa caawa 9:45 daqiiqo ee xiliga geeska Afrika wuxuu ku dhexmareyaa magaalada London kooxaha Chelsea & Barcelona oo ka kala socda wadamada England & Spain.
Kulankan oo ka dhacaya guriga kooxda Chelsea ee garoonka Stamford Bridge ee ku yaal galbeedka magaalada London waa kulankii 10-aad ee labadan kooxood ay isaga horyimaadaan kuwaasi oo min sadex jeer ay midba badisay kooxahan halkan afarta kulan ee kale ay galeen barbardhac.
Barcelona waxay u tahay markii shanaad ee isku xiga oo ay joogto u imaanayso Semi-final-ka Champions League, taariikhda si xiriir ah shan goor oo ay u timaado semi-final-ka oo isku xiga waxaa ugu dambeysay 1992/93).
Chelsea & Barcelona waxay si isku mid ah ah u yimaadeen Semi-final-ka Champions League lix jeer sagaalkii sano ee ugu dambeeyey tan iyo sanadkii 2003/04).
Tan iyo markii uu iibsadey kooxda Chelsea maalqabeenka Ruushka u dhashay ee lagu magacaabo Roman Abramovich waa markii 14-aad ee kooxdiisu ay timaado ciyaaro Semi-final ah dhamaan tartamada kala duwan.
Chelsea gurigeeda Stamford Bridge tartankan Champions League miciyo liibaax ayay ku leedahay shantii kulan ee ugu dambeysay ee ay ku ciyaartey dhineeceeda dhulka lama dhigin.
Barcelona socdaalkii ugu dambeeyey ee ay ku timaado magaalada London labadii sano ee ugu dambeeyey mid guul iyo koob ayay kala tagtey waa sanadkii hore 2011 May oo ay koobka Champions League-ga kaga qaaday garoonka Wembley kooxda Manchester United, midna guul daro ayay kala tagtey wareegii 16-ka ee Champions League-ga ee ay kooxda Arsenal 2-1 ku badisay gurigeeda Emirates Stadium February 2011, inkastoo Barcelona lugtii labaad ee wareegaasi ku badisay hoygeeda Nou Camp.
Barcelona kulanka kooxaha Ingiriiska si guud waxay ka haysataa 24 guul, 18 barbardhac iyo 16 guuldaro, balse ciyaaraha away-ga ay u tahay kooxaha English-ka canaan ayay kala kulantaa oo 13 jeer ayaa laga badiyey, 8 marna barbardhac halka ay badisay 6 mar oo kaliya.
Barcelona oo ku dhirirsan Real Madrid waa labada kooxood ee kaliya ee xili ciyaareedkan Champions League-ga aan hal marna lagama badin.
Chelsea oo ku dhirirsan Real Madrid waa labada kooxood ee kaliya 10 ciyaarood oo qayb ka ah Champions League-ga bilaabay gool dhalinta.
Barcelona waa kooxda ugu badan ee dhalisay goolasha Champions League xili ciyaareedkan waxay dhalisay 33 gool 10-kii kulan ee ay ciyaartey, waxay 12 ka badan tahay Chelsea oo 21 gool dhalisay.
Barcelona waxay heshay gool ku laadka ugu badan Champions League iyadoo shan rigoore heshay halka Chelsea ay tahay kooxda ku soo xigta oo loo dhigay 3 rigoore.
Lionel Messi waa ciyaaryahanka ugu horeeya ee Champions League-ga socda dhaliya 14 gool, 27-kii kulan ee Champions League ah ee ugu dambeeyey wuxuu dhaliyey 32 gool, guud ahaan goolasha Champions League-ga ee uu dhaliyey ayaa dhan 51 gool waxaana ka horeeya laba nin oo kaliya oo kala ah Raul oo leh 71 gool iyo Ruud Van Nistelrooy oo leh 56 gool.
Chelsea waa kooxda ugu badan ee Lionel Messi uu Champions League la ciyaaray waligiisna hal gool kama dhalin lixdii kulan ee uu saftey oo kooxdiisu ay la ciyaartey Chelsea.
Roberto Di Matteo iyo Josep Guardiola (Ciyaatroy & tababarayaal iska horyimid)
Labada tababare ee kala wata Chelsea & Barcelona Roberto Di Matteo iyo Josep Guardiola waxay iska horyimaadeen iyagoo ciyaartoy ah oo u kala safan Chelsea & Barcelona ciyaar ka tirsan Champions League-ga bishii April 2000 kulankaasi oo Barcelona ay ku badisay 6-4 aggregate ah waxaa xiligaasi labadan tababare Roberto Di Matteo iyo Josep Guardiola ay ka ciyaareen khadka dhexe.
Dhaawacyada labada kooxood
Tababaraha ku meel gaarka ah ee Chelsea Roberto Di Matteo wuxuu xaqijiyey in ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara David Luiz uu dhaawac ahaan uga maqnaan doono kulanka caawa ee Champions League iyo waliba kulanka xiga ee guriga Barcelona ka dhacaya, wuxuu sheegay in difaaca reer Brazil uu ka soo bogsan doono dhaawaca dhanka muruqa ah mudo laba todobaad ah, laakiin waxaa Chelsea fursad u helaya in uu u ciyaaro Branislav Ivanovic oo tartamada gudaha England ganaax sadex kulan ah qaba.
Barcelona dhankeeda waxaa war wanaagsan uga soo baxay in dhaawacyadii dhanka difaacyada haystey ee Dani Alves iiyo Gerarad Pique ay ka soo raayeen oo ay u diyaar yihiin in kulankan caawa la safo, laakiin Barcelona waxaase dhaawac darsrtiis Spain looga soo tagey ciyaaryahanka Muslimka ah Seydou Keita ee dalka Mali u dhashay.
aadan c/dala cali (guulayste) says:
Apriil 18, 2012 at 2:36 pm
waxaan filayaa caawa insha’allaah inay badinayso gaalada barcelona
Apriil 18, 2012 at 2:46 pm
asc dhamaan bahda saxaafada gaar ahaan sbclive.com salaan kadib aniga waxaa aamisanahy in ay caawa badinayso barcelona hadii alle idmo inkstoo aan laqiyaasi karin lkn insha allah waa ay badinaysaa hadii alle idmo barcelona guul barcelona guul
Apriil 18, 2012 at 2:49 pm
asc dhamaantiin haa ahmed abdi aniga fikirkaa ayaan qabaa inay ay badinayso barcelona hadii alle idmo wepsed dhalinyara qorta waxaa ka codsanaynaa inay nala soo socodsiyaan sportiga haba meesha uu maraayo barcelona guul barceloona guul barcelons guul